youtube tv သည်အချို့သောအဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာများကိုအခမဲ့စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်
အဓိက သတင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ YouTube TV သည်အချို့သောအဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာများကိုအခမဲ့စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်
YouTube TV သည်အချို့သောအဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာများကိုအခမဲ့စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်
COVID-19 သည်သန်းနှင့်ချီသောလူများနေရာတွင်နေထိုင်ရန်ဆက်လက်ဖိအားပေးနေစဉ်၊ မီဒီယာ streaming စျေးကွက်ကျိန်းသေကြီးထွားလာသည် ။ YouTube TV သည်ပရီမီယံအပိုဆောင်းပါဝင်မှုအကြောင်းအရာများကိုကြိုးစားလိုသူမည်သူမဆိုအတွက်အထူးအခမဲ့အခွင့်အလမ်းအချို့ကိုပေးသည် - သို့မဟုတ်အခြားတစ်လ၏ပျင်းစရာကောင်းသည့်အိမ်တွင်အိမ်တွင်နေရန်တစ်ခုခုရှာပါ။
YouTube TV သည်၎င်း၏ကွန်ရက်တည်ရှိမှုကိုဖြန့်ကျက်ထားသည့်ကေဘယ်ကွန်ယက်များအနေဖြင့်၎င်းတွင်တောင်းဆိုမှုပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်တိုက်ရိုက်အင်တာနက်တီဗီများပါဝင်သည်။ ၎င်း၏သက်တူရွယ်တူအများစုကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောချန်နယ်များနှင့်အတူထပ်ဆောင်းအခကြေးငွေများထပ်ဆောင်းပေးရမည့်ထပ်ဆောင်းချန်နယ်အချို့ရှိသည်။
သို့သော် ၀ န်ဆောင်မှုသည်အခမဲ့ အသုံးပြု၍ ရသောအခမဲ့ပရိုဂရမ်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာရန်တွစ်တာသို့ယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအားတစ်လအတွင်းကတိက ၀ တ်မဲ့မှုအတွက်ရေပန်းစားသော add-on ရွေးစရာ ၆ ခုကိုနမူနာယူနိုင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်ယခင်သုံးစွဲသူများမှစုံစမ်းခြင်းကိုမခံရပါကအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
အသစ်သောအကြောင်းအရာများသို့ငုပ်ရန်ပစ္စုပ္ပန်ကဲ့သို့အချိန်မရှိသေးပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏အချို့သော add-ons များကိုယခုတစ်လအခမဲ့ trial အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ဒီချန်နယ်များကိုလှည့်ဖျားအတွက်ဘယ်တော့မှယူမထားဘူး။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ️ @ပွဲစချိန် @AcornTV @CuriosityStream @Sundance_Now @WatchUMC @ Shudder
- ယူကျု့တီဗွီမှာ (@YouTubeTV) 2020ပြီလ 29, 2020
အဲဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုရဲ့ရရှိနိုင်မှုသို့မဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံး၏စကားလုံးမရှိသေးပေ, ဒါပေမယ့်သူကအနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်းအချိန်န်းကျင်ကပ်လိမ့်မည်ဟုဖွယ်ရှိပုံရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဓိက YouTube TV ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်တိုင်ကလည်းအခမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကအင်တာနက်တီဗီဝန်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်မှုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းအခမဲ့ရယူရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ယခုအချိန်တွင်အချိန်များစွာပိုမိုရရှိလာကြသည်။
google nexus ဖုန်းဖြန့်ချိသည့်နေ့
iPad Pro 2018 နှင့် iPad Pro 2017 - iPads အသစ်များသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကအရွယ်အစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
Samsung & apos ၏နောက်ထပ် Android tablet နှစ်မျိုးသည်သူတို့၏ (အကျွမ်းတဝင်) ဘုန်းအသရေအားလုံးတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
အကောင်းဆုံး iPad Pro (2021) မျက်နှာပြင်အကာအကွယ်
Verizon ၏ 4G ကွန်ယက်သည် 5G များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမည်သို့ထွက်ပေါ်လာသည်
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Black Friday တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်လျောက်ပတ်သော Surface Pro6နှင့် Surface Go စုဆောင်းမှုများပါ ၀ င်သည်
Samsung Galaxy Note 8 ၏နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသည့် specs review - ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစက်
ဒီအခမဲ့အယ်ဒီတာနဲ့အတူသင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်ရှိသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုမည်သို့ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်
16 နှစ် Apple iPhone 5c ကို Best Buy မှနှစ်နှစ်စာချုပ်ဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
သီချင်းစာသားများ၊ အယ်လ်ဘမ်အနုပညာများကိုတံဆိပ်တပ်ခြင်း၊ ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်သင်၏ Android ဖုန်းမှသီချင်းများကိုလွယ်ကူစွာဖွဲ့စည်းနိုင်ပုံ